News Code : 687355
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ဇေယာရတ်နာမေများ တွင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ထံ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ထံဝဇီလာပြုပြီး ရှဖာအတ် (အသနားခံပေးမှု)အားတောင်းဆို ထားကြပါသည်။ဇေယာရတ်အာရှုရာ၏ နောက်ဆုံး စဂ်ျသာပြုရချိန်တွင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အား ချီးမွမ်းထောပနာ မှုပြုပြီး ကိုယ်တော်(အ.စ)၏ဆင်းရဲ၊ဒုက္ခများအပေါ် သည်းခံနိုင်မှုအတွက် ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ပြောကြပါသည်။
ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ဖတ်ရွတ်ကြပါသည်။
أَللّهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَومَ الْوُرُودِ
အဓိပ္ပါယ်။။အို အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ကေယာမသ်၊ကမ္ဘာတရားစီရင်မည့်နေ့တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ရှဖာအတ်(အသနားခံပေးမှု)ကို ပေးသနားတော်မူပါ။
وثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ
အဓိပ္ပါယ်။။ အို အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ကျွန်တော်မျိုးတို့အား အေမာမ်ဟိုစိုင်း (န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏သာဝကတော်များနှင့်အတူ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းပေးသနား တော်မူပါ။ထိုသူများ(အေမာမ်(အ.စ)၏သာဝကတော်များ)သည် အရှင်၏ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် မိမိတို့၏ အသက်များကို စတေးခဲ့ကြပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ဂွန်ဗတ်တော်အောက်တွင် ဒိုအာကဗူလ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခါကေရှဖာ(ကရ်ဗလာမြေတုံး၊မြေခဲ)မှပျောက်ကင်းမှု၊ရရှိမှု၊စသည့်အကျိုးအာနိသင် ကောင်းများသည် ကြီးမားသည့် ရှဖာအတ်တော်မှဖြစ်ပေသည်။
ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရီဝါယတ်တော်များ လာရှိပေသည်။ အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် နောက်ဆုံးမိမိ၏ဘိုးတော် ရစူလ်လေခိုဒါ(ဆွ)၏ရောင်ဇာ တော်အား နောက်ဆုံးဇေယာရတ်ပြုပြီး အိပ်ပျော်သွားတော်မူလေသည်။အိမ်မက် တော်အတွင်း မိမိ၏ဘိုးတော်သည် ဤဩဝါဒတော်အား ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။
اِنَّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ دَرَجاتٌ لاتَنالُها اِلاّ بِالشَّهادَةِ
စိတ်ချယုံကြည်စွာပြောနိုင်သည့်အချက်မှာ ဤနေရာ၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ ဤရှဖာအတ်(အသနားခံမှု)ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ရှဖာအတ်(အသနားခံမှု)ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျွန်တော်အနေဖြင့် မိမိကြိုက်သည့် ဂိုနာအတိုင်းအား ကျူးကျော်မည်၊ဝါဂျစ်ဗ်အလုပ်တိုင်းကို မလုပ်ပဲနေ မည်၊ပြီးနောက် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်ထံ မေတ္တာရပ်ခံ မည်။ကိုယ်တော်အားမိမိ၏ ရှဖီးအ်(အသနားခံပေးသူ)အဖြစ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ထံတော်ဝယ် တောင်းခံခြင်းကိုဆိုလိုပါသလား?
မုချဧကန် ဤကဲ့သို့ မဟုတ်ချေ။မာစူမီး(အ.စ)၊အောင်လီယာအေလာဟီ(အ. စ)၊နဘီများ(အ.စ)၏ ရှဖာအတ်သည် ဂိုနာများပြုလုပ်ဖို့ မီးစွမ်းပြခြင်းကို မဆိုလိုချေ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပြီး ဂိုနာများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းသည်ကား-ကျွန်တော်အနေဖြင့် ရှဖာအတ်ကို တောင်းခံလိုချိန်တွင် အကယ်၍ တိမ်းစောင်းသွားမှု၊လွဲချော်သွားမှု ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ နောက် ထပ်၊ထပ်ပြီး ဂိုနာများ မကျူးလွန်မိစေရန် သတိတရားထားရပေမည်။ထိုမှသာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များ(နဘီ(ဆွ)၊ရစူလ်များ(အ.စ)၊အဟ်လေ့ ဘိုက်(အ.စ)နှင့် ကျွန်တော်၏ အဆက်အသွယ် မပြတ်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်။ဤ နည်းဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များကို အလွန်တရာခွင့်လွတ်တော်မူ သော၊အလွန်တရာအသနားကြင်နာတော်မူသော အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ထံ ဝယ် ရှဖီးအ်(အသနားခံပေးသူ)များအဖြစ် တောင်းဆိုနိုင် လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် မဂျလစ်များတွင် တက်ရောက်ယူမည့် အချိန်တွင် ဓမ္မကထိကများထံမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်၏ အခြေအနေများကို ကြားနာ ကြရပါသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်သူ၊အိမ်တော်သားများ၊ သာဝကတော်များ၏ ရဲရင့်၊သတ္တိ၊ဗျတ္တိရှိမှုများ၊စတေးအနစ်နာခံမှုများ၊ရှေရ်ခ်၊ဇိုလ်မ်၊အ မှားများအား တော်လှန်ချေမှုန်းမှုတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်မိမိ၏ဝိညဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်စေရပေမည်။ပြီးနောက် မိမိတို့၏ ကြီးမားသည့် ဦးသျှောင်၊ခေါင်းဆောင်များ၊ရ စူလ်(ဆွ)၊အာလေရစူလ်(အ.စ)တို့၏ အမိန့်တော်များကို မြေဝယ်မကျ လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် စဉ်းစား၊ဆင်ခြင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါ သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ခြေလှမ်းများနှင့်အညီ မိမိခြေလှမ်းကိုလည်း လှမ်း နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရပေမည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)၏(စစ်မှန်သည့်)အုပ်စုအတွင်း စာရင်းဝင် လာရန်ကြိုးစားရပေမည်။ဤသည်လည်း မိမိအတွက် ရှဖာအတ်၏အမျိုးအစား တစ် ခုဖြစ်သည့် ရှဖာအတ်သေသက်ဝီနီ ဆွတ်ခူးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ပြီးနောက် မြင့်မြတ်သန့်စသ်သည့် ကရ်ဗလာမြေသို့ ဇေယာရတ်ပြုရန်သွား သည့် အချိန်အခါတွင် အေမာမ်(အ.စ)နှင့် သန့်စင်၊သန့်ပြန့်သည့် သခင်၏သာဝကအ ပေါင်းအပါများ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သည့် နေရာများကို အနီးကပ်ကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း မလွဲမသွေ ဤပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းရ မည်ဆိုသည့် တာဝန်အသိတရားကို ခံစားရယူရပေမည်။ထို့နောက် မိမိခေတ်ကာလ ၏ ယဇီးဒ်(လ.န)နောက်လိုက်များကို တော်လှန်ချေမှုန်းရပေမည်။ပြီးနောက် စစ်မှန် သည့် အစ္စလာမ်သာသနာတော်အား ရပ်တည်နိုင်ရန်၊တည်မြဲရန်၊ထိန်းသိမ်းရန်၊ စတေးလှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏သွေးတော်၊ကိုယ်တော်၏အိမ် တော်သူ၊အိမ်တော်သားများနှင့် သာဝကအပေါင်းအဖေါ်များ၏ သွေးများကိုလည်းရှင် သန်အောင် စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ရပေမည်။
ဤအတွက်လည်း လက်တွေ့ကြိုးစားကြရပေမည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)၏ရောင် ဇာတော်ကို ထိန်းသိမ်းရပေမည်။စော်ကားမှု၊မရိုမသေပြုမှု၊အမျိုးမျိုးမှကာကွယ်စောင့် ရှောက် ရပေမည်။ခေတ်တိုင်း၊ခေတ်တိုင်းရှိမည် ဖြစ်သည့်ရန်သူများ အရှေ့ရပ်တည် တော်လှန်ပြီး ကာကွယ်ရပေမည်။ထိုမှသာ ဟဇရတ်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင် ကြီး၏ ရှဖာအတ်ခံပေးရမည့်သူများ စာရင်းတွင် စာရင်းဝင်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်အား ဖေးမကူညီဖို့ မည်သူအသင့် ရှိပါသနည်း? ဆိုသည့်အသံတော်အား ကျွန် တော်တို့ နားထောင်ကြပြီးلبیک))ကိုယ်တော်အတွက် အသင့်ပါဟုအဖြေပေးပြီး၊ကိုယ် တော်(အ.စ)အား ဖေးမကူညီကြရပေမည်။